हराएका हिरा ६: सानो जहाज बनाउँदै गरेका सरोजले हेलिकप्टर बनाएर उडाएका छैनन « Nepal – the country of the Buddha and the Mt. Everest
« हिराको बिछौनामा सुत्ने गरीब नेपाली
सात देशको पाठ्य पुस्तकमा भएको गल्ती सच्याउने कामको पहल »
Posted by Ram Kumar Shrestha on October 27, 2018
(देश र संचार जगतद्धारा नपत्याइएका देशका अमूल्य निधिहरुको खोजी प्रयास सिलसिला ६)
कक्षा ६ सम्म मात्रै अध्ययन गरेका सरोजले प्यारामोटर र मिनिएयरक्राफ्ट दुबैको लागि करीब साँढे सात लाख खर्च गरिसकेका छन । प्यारामोटर उडाएको करीब चार महिनापछि उन्ले हेलिकप्टर बनाएर ५ मिनेटमा १२ किलोमिटर उडाउन सफल भएको भनी भिडियो बनाएर सामाजिक सन्जालमा भाईरल जस्तै बनाइेएको छ जुन सत्य होइन । उनी आफ्नो मिनिएयरक्राफ्टको परियोजनामा नै छन जुन आर्थिक अभावका कारण पुरा हुन सकिरहेको छैन ।
चितवनका सरोज चेपाङ (प्रजा) ले मिनी जहाज बनाउने लक्ष लिए तापनि बिभिन्न चुनौतिका कारण पहिला उन्ले करिब ९० हजारको लागतमा प्यारामोटर निर्माण गरे । तीन पटकको प्रयाशपछि सरोजले राप्ती नगरपालिकाको पिप्ले, भण्डारालगायत क्षेत्रको आकाशमा करिब आधा घन्टा प्यारामोटर उडाउन सफल भए । सफलतापूर्वक प्यारामोटर उडाएपछि उनलाई उन्को खिसी गर्दै आलोचना गर्ने लगायतका स्थानीयले फूलामाला र अबिर लगाएर बधाइ दिएका थिए ।
सरोजले एक महिना लगाएर एक्लैले प्यरामोटर निर्माण गरे । प्यारामोटर निर्माण गर्न १४९ सीसीको मोटरसाइलको एउटा पुरानो इन्जिन, एउटा प्यारासुट, ठेलाको टायर, क्लच, ब्याट्री, स्टिल, आलमुनियम र काठको पंखा बनाए । सरोजले आफ्नै लगानीमा स्थानीय स्रोतसाधनबाट निर्माण गरेर प्यारामोटर बनाएका हुन् ।
काठमाण्डौंमा गाडी बनाउने काम गर्दा सानो प्लेन र हेलिकप्टर बनाएर व्याट्रीमार्फत उडाउने गर्थे ।
प्याराग्लाइडिङ अघि निर्माण सुरू गरिएको सानो जहाजको काम अन्तिम चरणमा पुगे पनि ठूलो इन्जिन खरिद गर्न पैसा नहुँदा उनले जहाजको पाटपूर्जा खोलेर राखेका थिए । कक्षा ६ सम्म मात्रै अध्ययन गरेका सरोजले प्यारामोटर र मिनिएयरक्राफ्ट दुबैको लागि करीब साँढे सात लाख खर्च गरिसकेका छन । जहाज बनाउनका लागि उनले कच्चा पदार्थ, काठमाडौं, नारायणगढ र वीरगञ्जदेखि ल्याउने गरे ।
प्यारामोटर उडाएको करीब चार महिनापछि उन्ले हेलिकप्टर बनाएर ५ मिनेटमा १२ किलोमिटर उडाउन सफल भएको भनी भिडियो बनाएर सामाजिक सन्जालमा भाईरल जस्तै बनाइेएको छ जुन सत्य होइन । उनी आफ्नो मिनिएयरक्राफ्टको परियोजनामा नै छन जुन आर्थिक अभावका कारण पुरा हुन सकिरहेको छैन ।
यस्तो प्रतिभावना २० बर्षे युवाको प्रतिभाको सदुपयोग राज्यले गर्नतिर कुनै पनि चासो लिएको देखिन्न । हामी हरेक क्षेत्रमा कस्तुरी बनिरहेका छौं र विकासका ठूला ठूला सपना देख्ने र नारा दिने गरिरहेका छौं ।
This entry was posted on October 27, 2018 at 2:39 pm	and is filed under Article, प्रेरणादायी सामग्रीहरु, बिबिध, रोचक जानकारी. Tagged: सरोज चेपाङ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.